Hamàna - Wikipedia
Ampangain'i Estera i Hamàna, sary nataon'i Ernest Normand.
I Hamàna na Hamana dia olona resahina ao amin'ny Bokin'i Estera, izay minisitry ny Fanjakana persiana tamin'ny fotoana nanjakan'i Ahasoerosy (na Kserksesy I). Araka ny lovantsofina jiosy dia evan'ny fankahalana jiosy (antisemitisma) i Hamàna noho izy nikasa handripaka ny Jiosy, araka ny fitantaran'ny Bokin'i Estera. Atao hoe המן‎ / Hâmân izy amin'ny teny hebreo.
Araka ny Bokin'i Estera dia zanak'i Hamedata, izay tatranak'ilay mpanjaka amalekita atao hoe Agaga, i Hamàna. Fahavalon-drazan'ny vahoaka jiosy izany i Hamàna. Tao amin'ny tananan'i Sosa (na Sosàna na Soza) tamin'ny taonjato faha-5 no nisehoan'ny tantara.
Notendren'i Ahasoerosy ho ministra i Hamàna ka nanomana tetika handringanana ny Jiosy nonina tao amin'ny Empira persiana. Nampanao sonia didy ny mpanjaka izy handringanana ny vahoaka jiosy. Tsy nahomby ilay tetika noho ny hafetsen'i Estera izay lasa vadin'ny mpanjaka sy i Mordekay (na Mardôkea) rahalahin-drainy nitaiza azy, ka nifotitra tamin'i Hamàna sy ny fianakaviany izany tetika izany. Nahanton'ny Jiosy i Hamàna sy ny zanany lahy folo araka ny fankatoavan'ny mpanjaka Ahasoerosy.
Mba hahatsiarovana izany fivadihan'ny rasa izany dia naorina ny fetin'ny Porima (hebreo: Purim). Niseho miandalana ny fomba sasany izay anamarihana ny fanafahana ny Jiosy sy ny faharesen'i Hamàna. Izany no amakiana ny Bokin'i Estera ampahibemaso sy itabataban'ny mpivory sy ampanenoany zava-mikarantsana isaky ny tononina ny anaran'i Hamàna. Ny mpanao mofo sasany dia manamboatra mofo atao hoe "sofin'i Hamàna" (hebreo: אוזן המן / ozen Haman) izay hanina mandritra izany andro fety izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamàna&oldid=975180"
Voaova farany tamin'ny 3 Oktobra 2019 amin'ny 10:02 ity pejy ity.